Mon, Jun 1, 2020 at 7:36pm
एसिया छनोटअघि नेपालले मलेसियासँग २ खेलको टी-२० सिरिज खेल्ने
काठमाडौँ, १३ असार आइसिसी टी–२० विश्वकपअन्तर्गत एसिया छनोटअघि नेपालले मलेसियासँग २ खेलको टी-२० सिरिज खेल्ने भएको छ । विश्वकप छनोटको तयारीका लागि नेपालले मलेसियासँग टी–२० सिरिज खेल्न लागेको हो । मलेसियाको किनरारा ओभलमा असार २८ र २९ गते हुने खेल नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । आगामी साउन ६ देखि १२ गते सम्म हुने छनोटमा नेपालसहित ५ टिमको सहभागिता हुनेछ । नेपाल, सिंगापुर,..
विश्वकप क्रिकेट : श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै, कुन टिमको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं, १३ असार । विश्व कप क्रिकेट २०१९ अन्र्तगत रिभरसाइड मैदानमा शुक्रबार नेपाली समयअनुसार ३ बजेर १५ मिनेटमा श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिकाबीचको खेल सुरु हुँदैछ । दुई टिम जितको खोजीमा हुनेछन् । सेमिफाइनल यात्रालाई कायमै राख्नका लागि आजको खेल श्रीलंकाको लागि जित्नै पर्ने हुन्छ । तर पराजित भएमा श्रीलंकाको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कमजोर हुनेछ । ६ खेलमध्ये दुई खेलमा जित दुई खेलमा हार..
विश्वकप अंकतालिकामा इण्डिया दोश्रो, १२५ रनले पराजित वेष्ट इण्डिज बाहिरियो
काठमाडौँ, १२ असार । क्रिकेट विश्व कप २०१९ अन्र्तगत म्यानचेष्टरमा भएको ३४ औं खेलमा इण्डियाले वेष्ट इण्डिजलाई १२५ रनको फराकिलो अन्तरले हराएको छ । खेलमा पहिला ब्यार्टिग गरेको इण्डियाले पहिला ब्याटिंग गर्दै कुल ५० ओभर खेल्दै ७ विकेटको क्षतीमा २६८ रन बनायो । त्यसको जवाफमा वेष्ट इण्डिजले ३४ दशमलव २ ओभर खेल्दै १४३ रनमै समेटिन पुग्यो । वेष्ट इण्डिज विश्वकपबाट बाहिर यसैबीच बिहिबारको जीतसँगै..
अन्ततः कोहलीले तोडे तेन्दुलकर र लाराको कीर्तिमान !
काठमाडौं, १२ असार भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले सर्वाधिक छिटो २० हजार रनको कीर्तिमान राखेका छन् । विश्वकप क्रिकेटमा वेष्ट इन्डिजविरुद्धको खेलमा उनले ३७ रन बनाएसँगै सर्वाधिक छिटो २० हजार रनको कीर्तिमान राखेका हुन् । कोहलीले ४१७ पारीमा २० हजार रन बनाएका हुन् । उनले यो रन १३१ टेष्ट, २२४ एकदिवसीय र ६२ टी–२० खेलको गरी पूरा गरेका हुन् । वेष्ट इन्डिजविरुद्धको..
सन्यासको घोषणा फिर्ता लिदैं क्रिस गेलले भने - मेरो लक्ष्य नै विश्वकप जित्ने हो
काठमाडौं, १२ असार । वेष्ट इन्डिजका ब्याट्सम्यान तथा ‘युर्निभसल बोस’ क्रिस गेलले एकदिवसीय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा फिर्ता लिएका छन्। गत फेब्रुअरीमा विश्वकप क्रिकेटपछि एकदिवसीय क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका उनले सन्यास फिर्ता लिएको बताएका हुन्। ३९ वर्षीय गेल वेष्ट इन्डिजका आक्रामक ब्याट्सम्यान मानिन्छन्। उनले जारी विश्वकपमा १९४ रन बनाएका छन् । यो क्रममा उनले दुई अर्धशतक बनाएका छन्। उनी एकदिवसीय क्रिकेट खेलमा..
विश्वकप क्रिकेटमा आज भारत र वेस्ट इन्डिजबीच कडा मुकाबला, कसको पल्ला भारी ?
काठमाडौं, १२ असार । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा बिहिबार भारत र वेस्ट इन्डिजबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । ५ खेलमा ४ जित हासिल गरिसकेको भारत बिहिबार पनि जितको खोजीमा हुनेछ । ६ खेलबाट ३ अंक जोडेको वेस्ट इन्डिजलाई सेमिफाइनल पुग्न बाँकी तीनै खेल जित्नैपर्ने दबाब छ । वेस्ट इन्डिजका लागि मध्यक्रमका आक्रामक ब्याट्सम्यान आन्द्रे रसेल चोटका कारण विश्वकपबाट बाहिरिएका छन् । ..
नेपालको लिग च्याम्पियन मनाङ मस्र्याङ्दी भारतको चेन्नईयिन एफसीसँग पराजित
काठमाडौँ, ११ असार एएफसी कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको लिग च्याम्पियन मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब भारतको चेन्नईयिन एफसीसँग पराजित भएको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा आज भएको लिग चरणको आफनो अन्तिम खेलमा मनाङ चेन्नइयिनसँग ३–२ गोलअन्तरले पराजित भएको हो । चेन्नईयिनको जितमा मोहमद राफीले दुई गोल गरे भने इला साबिया फिल्होले एक गोल थपे । राफी खेलको ५३ औँ मिनेटमा पहिलो गोल..
खेलकूद क्षेत्रलाई परिणाम मुखी बनाउँछौं : मन्त्री मगर
कञ्चनपुर, ११ असार खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले खेलकूद क्षेत्रलाई परिणाममुखी बनाउन सरकार योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको समापन समारोहमा आज उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पहिचान गराउने माध्यम खेलकूद भएकाले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्नका लागि सरकार कटिवद्ध रहेको बताउनुभयो । मन्त्री मगरले खेल बहुआयामिक क्षेत्र भएकाले यसलाई लक्ष्य प्राप्ति, आत्म–अनुुसाशित र व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो ।..
प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि एपिएफलाई
भीमदत्तनगर, ११ असार कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले जितेको छ । आज बिहान घरेलु टोली सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई छ विकेटले पराजित गर्दै एपिएफले सो उपाधि जितेको हो । टस जितेर फिल्डिङ रोजेको एपिएफले निर्धारित २० ओभरको खेल ७१ रनमा समेटेको थियो । बहत्तर रनको विजय लक्ष्य पाएको एपिएफले १४ ओभरमा चार विकेटको क्षतिसहित ७४..
इँग्ल्याण्डलाई ६४ रनले हराउँदै अस्ट्रेलिया सेमिफाइनल प्रवेश
असार १० । आफ्नो चीर प्रतिश्पर्धी इँग्ल्याण्डलाई ६४ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको अस्ट्रेलियाले ७ विकेटको क्षतीमा कुल २८५ रन बनाएको थियो । जवाफमा मैदानमा उत्रिएको इँग्ल्याण्ड ४४ दशमलव ४ ओभरमा अलआउट हुँदै २२१ रनमै समेटियो । यस खेलमा अस्ट्रेलियाले नाथन कूल्टर नाइल र एडम जाम्पाको स्थानमा जेसन बेहरेनडोर्फ र..
डेभिड वार्नर बने विश्वकप २०१९ मा ५ सय रन बनाउने पहिलाे खेलाडी
काठमाडौँ, १० असार डेभिड वार्नर आईसीसी विश्वकप क्रिकेट २०१९ मा ५ सय रन बनाउने पहिलो खेलाडी बनेका छन् । जारी विश्वकपमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी पनि वार्नर नै हुन् । वार्नरले मंगलबार इंग्ल्याण्डविरुद्ध लर्डसमा ५३ रनको पारी खेल्दै ५ सय रन पूरा गरेका हुन् । वार्नरले यस विश्वकपमा २ शतक तथा तीन अर्धशतक बनाइसकेका छन् । उनको जारी विश्वकपमा सर्वाधिक स्कोर १६६..
विश्वकप क्रिकेट : अस्ट्रेलियाले इंग्ल्यान्डलाई दियो २ सय ८६ रनको लक्ष्य, फिन्चले हाने सतक
एजेन्सी, १० असार आइसिसी क्रिकेट विश्वकपमा अस्ट्रेलियाले आयोजक इंग्ल्यान्डलाई २८६ रनको लक्ष्य दिएको छ। लन्डनको लर्ड्स मैदानमा टस जितेको इंग्ल्यान्डले फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले ५० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा २८५ रन जोड्यो। अस्ट्रेलियाका लागि ओपनर तथा कप्तान आरोन फिन्चले शतक प्रहार गरे। ११६ बलको सामना गरेका उनले ११ चौका र २ छक्का हिर्काए। उनका ओपनिङ पार्टनर डेभिड वार्नरले ५३ रनको योगदान..
नेइमार बार्सिलोना फर्किनका लागि पारिश्रमिक आधा घटाउन तयार
एजेन्सी, १० असार । स्पेनिस पत्रिका स्पोर्टसका अनुसार नेइमार बार्सिलोना फर्किनका लागि आफ्नो पारिश्रमिक घटाउनका लागि तयार भएका छन् । उनले आफूले अहिले पाउँदै आएको भन्दा झण्डै आधा पारिश्रमिक लिन पनि तयार रहेको बताएको खबरमा उल्लेख छ । नेइमारले बार्सिलोना फर्किनका लागि हप्ताको पाँच लाख ५० हजार पाउण्ड जति पारिश्रमिक भए हुने बताएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सन् २०१७ मा आफूले..
२७ वर्षदेखि अस्ट्रेलियासँग जीतको खोजीमा इंग्ल्यान्ड, आज 'हेड टु हेड'
काठमाडौं, १० असार । एकदिवसीय खेलको एसेजका रुपमा हेरिएको विश्वकपको ३२ औं खेलमा मंगलबार लन्डनको लर्डस मैदानमा मंगलबार अस्ट्रेलिया र इंग्ल्यान्डबिच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । विश्वकपमा इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाबिच पछिल्लो पटक २०१५ मा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त खेलमा अस्ट्रेलिया विजयी भएको थियो । साे खेलमा एरोन फिन्चले १३५ बनाएर टिमलाई विजयी बनाएका थिए । सँयोग यो पटक फिन्च आफै अस्ट्रेलिया टिमको कप्तानका..
काठमाडौँ, असार ९ । विश्वकपमा बँग्लादेशसँगको प्रतिश्पर्धामा अफगानिस्तानले ६२ रनको हार व्यहोरेको छ । यसअघि इण्डियासँग ११ रनले पराजित अफगानिस्तान विश्वकपको तालिकामा समेत झन् कमजोर बनेको छ । विश्वकपको ३१ औं खेल अन्र्तगत बेलायतको साउथ्याम्टन सोमबार अबेर रातिसम्म भएको खेलमा अफगानिस्तान २०० रनमै अलआउट भएको थियो । खेलमा पहिला ब्याटिंग गरेको बँगलादेशले ७ विकेटको क्षतीमा २६२ रन बनाएको थियो । त्यसको जवाफमा मैदानमा..
एजेन्सी, ९ असार इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी एकदिवसिय विश्वकपमा खराब फर्ममा रहेको वेष्ट इण्डिजलाई ठूलो धक्का लागेको छ । उसका अलराउण्डर आन्द्रे रसेल विश्वकपबाट बाहिरिएका छन् । लामो समयपछि विश्वकपका लागि टिममा परेका वेष्ट इण्डिजका विस्फोटक ब्याट्सम्यान तथा बलर रसेल चोटका कारण विश्वकपमा दुई खेलमा पनि टिम बाहिर परेका थिए । अब उनको चोट निको नहुने भएपछि उनले विश्वकपका बाँकी खेल गुमाउने..
एजेन्सी, ९ असार आइसिसी क्रिकेट विश्वकपमा बंगलादेशले अफगानिस्तानलाई २६३ रनको लक्ष्य दिएको छ। साउथह्याम्टनमा टस जितेको अफगानिस्तानले फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले ५० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा २६२ रन जोड्यो। बंगलादेशका लागि मुस्फिकर रहिमले सबैभन्दा बढी ८३ रनको योगदान दिए। उनले ८७ बलमा ४ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। सकिब अल हसनले ५१ रन जोडे। उनले ६९ बलको सामना गर्दा १..
एजेन्सी, ९ असार ब्राजिलिएन स्टार नेमार जुनियर नयाँ सिजनको सुरुवातसँगै बार्सिलोनामा पुनः अनुबन्ध हुने चर्चा चलिरहेको छ। यसबीचमा नेमारले बार्सिलोनाका आफ्ना पुराना साथीहरुलाई म्यासेज पठाएर आफू बार्सिलोनामा पुनः अनुबन्ध हुन लागेको जानकारी गराएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद न्यूज पोर्टल ‘स्पोर्ट’का अनुसार नेमारले मेस्सी र स्वारेजलाई अन्तिमपटक म्यासेज पठाउँदै ‘चिन्ता नगर म आउँदै छु’ भनेका छन्। केही हप्तायता नेमारले पीएसजी छाड्ने अभिव्यक्ति दिएको हल्लाहरु चलेका छन्। नेमारले..
पोर्टो अलेग्री, ९ असार लाउटारो मार्टिनेज र सर्जिओ अग्वेरोको गोलको मद्दतले अर्जेन्टिनाले कतारलाई २–० गोल अन्तरले पराजित गरी अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाली समय अनुसार सोमबार बिहान भएको समूह ख कै अर्को खेलमा कोलम्बियाले पाराग्वेलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गरेका कारण पनि अर्जेन्टिनालाई क्वाटरफाइनलमा प्रवेश सहज भएको हो ।समूहमा दोस्रो..
चितवन, ९ असार । राष्ट्रियरुपमा चर्चा पाएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि प्रदेश नम्बर ३ सरकारले रु पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका र वडा कार्यालयले पनि रकम विनियोजनको तयारी गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार प्रदेश सरकारले रु पाँच करोड रकम विनियोजन गरिसकेको छ । काम अघि बढ्दै गर्दा थप रकम दिन प्रदेश सरकार..
असार ८ । आइतबार अबेर राति सम्पन्न खेलमा साउथ अफ्रिकाको विश्वकप यात्रामा ठेस लागेको छ भने पाकिस्तानले भने खेलमा कम्ब्याक गरेको छ । खेलमा पहिला व्याटिंग गरेको पाकिस्तानले निर्धारित ५० ओभरको खेल अन्र्तगत ७ विकेटको क्षतिमा कुल ३०८ जोड्यो । जीतका लागि ३०९ को लक्ष्य लिएर जवाफी ब्याटिंगमा उत्रिएको दक्षिण अफ्रिकाले ९ विकेट गुमाउँदै जम्मा २५९ रनमै अड्कियो । खेलमा ४९ रनको..
एजेन्सी, ८ असार आईसीसी विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत अफगानिस्तानविरुद्धको खेलमा भारतीय बलर मोहम्मद शामीले ह्याट्रिक लिए । भुवनेश्वर कुमार घाइते भएपछि उनको सट्टामा यो विश्वकपमा पहिलो पटक मैदानमा उत्रिएका शामी एकदिवसीय विश्वकपमा १० औं ह्याट्रिक लिने बलर भएका छन् । विश्वकपमा ९ बलरले १० पटक ह्याट्रिक लिँदा श्रीलंकाका बलर लसिथ मालिंगाले दुई पटक ह्याट्रिक लिएका छन् । यी हुन् विश्वकपमा ह्याट्रिक लिने बलरहरु– १. चेतन..
काठमाडौँ, ८ असार आईसीसी एक दिवसीय विश्वकपमा पाकिस्तानले दक्षिण अफ्रिकालाई तीन सय नौ रनको लक्ष्य दिएको छ । लर्ड्समा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले ५० ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै तीन सय ८ रन बनायो । बलियो सुरुवात गरेको पाकिस्तानले पहिलो विकेटका लागि ८१ रनको साझेदारी गरेको थियो । उसका ओपनर फखर जमान ४४ रनमा आउट भए । त्यसपछि इमाम उल..
काठमाडौं, ८ असार । ईंग्ल्याण्डमा जारी विश्वकप क्रिकेटमा आईतबार पाकिस्तानले दक्षिण अफ्रिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । दुवै टिम जित हात पार्ने लक्ष्यमा छन् । विश्वकपको सेमिफाइनल यात्रालाई झिनो आस कायमै राख्नका लागि भए पनि दुवै टिमलाई जित्नै पर्ने अवस्था छ । दक्षिण अफ्रिका आफ्नो पहिलो खेलमा इंल्ग्यान्डसँग १०४ रनले पराजित भएको थियो । दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग २१ रनले हारेको दक्षिण अफ्रिकाले तेस्रो खेलमा भारतसँग..
काठमाडौँ, ८ असार । ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा आयोजक ब्राजिलले फराकिलो जित निकालेको छ । आइतबार बिहान भएको खेलमा ब्राजिलले पेरुमाथि ५–० को जित हात पारेको हो । यसअघिको खेलमा भेनेजुएलासँग बराबरीमा रोकिएको ब्राजिल बलियो प्रतिद्वन्दी मानिएको पेरुविरुद्ध चम्किएको हो । ब्राजिलले ३ गोल पहिलो हाफमा र २ गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो । ब्राजिलका लागि पहिलो हाफमा कस्मिरो, रोवेर्टो फर्मिनो ..
काठमाडौँ, ७ असार । ईंग्ल्याण्डमा जारी क्रिकेट विश्वकप अन्र्तगत शनिबार राती भारत विरुद्धको रोमाञ्चक खेलको अन्तिम ओभरमा भारतका बलर मोहम्मद शमी चम्किएपछि अफगानिस्तानले जित्दा जित्दैको खेल गुमाएको छ । खेलमा जीतको नजिक पुगिसकेको अफगानिस्तानका ३ जना ब्याट्स्म्यान अन्तिम ओभरमा शामीको शिकार बनेपछि भारत ११ रनले विजयी भएको हो । यस जितसँगै भारतको कुल ५ खेलबाट ९ अंक जोडिएको छ । जीतका लागि २२५..
काठमाडौँ, ७ असार भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले २० हजार अन्तर्राष्ट्रिय रन पूरा गर्ने विश्वको १२ औंँ खेलाडी बन्न अझै अर्को इनिङ कुर्नुपर्ने भएको छ । कीर्तिमानबाट १०४ रन टाढा रहेका काेहलीले शनिबारको खेलमा ६७ रन मात्र बनाउन सके । उनले २० हजार रन पूरा गरेको भए कम इनिङ (४१६) मा २० हजार रन बनाउने पहिलो खेलाडी बन्ने थिए । अहिले यो..
एजेन्सी, ७ असार इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी १२ औँ आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा भारतले अफगानिस्तानलाई २ सय २५ रनको सामान्य लक्ष्य दिएको छ । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा २ सय २४ रन मात्रै बनाएको हो । भारतका लागि कप्तान विराट कोहलीले सर्वाधिक ६७ रन बनाए । यस्तै केदार जादवले ५२, केएल राहुलले ३०,..
काठमाडौँ, ७ असार । लाथिस मालिङ्गा चम्किएपछि श्रीलंकाले विश्वकप आयोजक टोली इङ्ल्याण्डलाई २० रनले पराजित गरेको छ । लिड्समा २ सय ३३ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोली इङ्ल्याण्डले मालिङ्गाको धारिलो बलिङसामू निरीह हुँदै २० रनले नतिजा सुम्पिन बाध्य भएको हो। श्रीलंकासँग पराजित भए पनि इङ्ल्यान्ड अंकतालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। श्रीलंका ६ खेलबाट ६ अंकसहित पाँचौ स्थानमा उक्लेको छ। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको इङ्ल्यान्ड..
काठमाडौँ, ६ असार । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने र तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी क्यानाडाको आधिकारिक ग्लोबल टी– ट्वान्टी क्रिकेट लिगका लागि अनुबन्ध भएका छन् । राष्ट्रिय टोलीका सदस्य सन्दीपलाई टोरन्टो नेसनल्सले १०औँ चरणमा ६० हजार अमेरिकी डलर खर्चेर खरीद गरेको हो । सन्दीपले आफ्नो न्यूनतम मूल्य ६० हजार अमेरिकी डलर तोकेका थिए । सन्दीपको टोलीको मार्की खेलाडी..
Results 1917: You are at page 21 of 64